Health Sync 5.7.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.7.1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Health Sync
Health Sync ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Sync your health data between Google Fit and Samsung Health, or with Fitbit, Garmin, Withings (Health Mate), Suunto or Polar. Every 10 minutes or justafew times per day, you choose how often.
Fitbit data (sleep, activity, steps and weight) is synced to Samsung Health. You can also choose to sync Samsung Health data (sleep, activity and weight) to Fitbit. It is currently not possible to sync Fitbit data to Google Fit, or to sync data from Google Fit to Fitbit. The sync from Fitbit from and to Google Fit will be added in the future.
Polar data (activity, steps and weight) is synced to Samsung Health. It is currently not possible to sync Polar data to Google Fit.
Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် Samsung ကနျြးမာရေးအကြား, ဒါမှမဟုတ် Fitbit, Garmin နှင့်အတူ (ကျန်းမာရေး Mate), Suunto သို့မဟုတ်အရောင်အသွေးစုံနှင့်အတူသင်၏ကျန်းမာရေးဒေတာထပ်တူပြုပါ။ တစ်နေ့လျှင်တိုင်း 10 မိနစ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ကြိမ်, သင်ဘယ်လောက်မကြာခဏရွေးချယ်ပါ။
အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကို: သင် Google ကြံ့ခိုင်မှုများအတွက် googlemail.com အကောင့်ကိုအသုံးပြုသောအခါ googlemail.com
, ဒီအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ googlemail.com အကောင့်နဲ့ Google ကပြဿနာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ gmail အကောင့်တစ်ခု webbrowser ရဲ့ login ခုနှစ်တွင် နဲ့ gmail က settings ကိုသွားပါ: အကယ်. သင်ဤ fix နိုင်ပါတယ်။ က "အကောင့်များနှင့်သွင်းကုန်" tab ကိုသွားပြီး entry ကိုသင့်ရဲ့ gmail အကောင့်များအတွက် "အဖြစ်ပေးပို့" ကိုရှာပါ။ Next ကိုသင် "@ gmail.com မှအပြောင်းအလဲ" link ကိုသုံးပါနှင့်အတည်ပြုဖို့ရှိသည်။ ကိုက
ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံး app ကိုအသုံးပြုအချိန်ကနေဒေတာတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်ချိန်ကိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သမိုင်းဒေတာ (တပ်ဆင်ခ၏နေ့အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ Data) အခမဲ့လမ်းကြောင်းကာလပြီးနောက်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လက်ရှိဒီသာ Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် Samsung ကနျြးမာရေးအကြားထောက်ခံသည်။
ကျန်းမာရေး Sync ကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အခမဲ့အစမ်းကာလပေးထားပါတယ်။ အဲဒီနောကျသငျသညျကနျြးမာရေး Sync ကိုသုံးပြီးဆက်လက်သေးငယ်တဲ့ကြေးပေးသွင်းငွေပမာဏတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။
Sync ကိုလမျးညှနျခ Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် Samsung ကနျြးမာရေး
အလေးချိန်, ရေစားသုံးမှု, အာဟာရ, သွေးဖိအား, သွေးဂလူးကို့စ, သွေးအောက်ဆီဂျင်ရွှဲနှင့်နှလုံးနှုန်းထားများနှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်ထဲမှာတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေကြသည်: Samsung ကကနျြးမာရေးအနေဖြင့် Google ၏ကြံ့ခိုင်နှင့် Google Fit မှ Samsung ရဲ့ကနျြးမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကျန်းမာရေးဒေတာ (ခြေလှမ်းများ, အိပ်စက်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း / လှုပ်ရှားမှု) တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်: Samsung ကကနျြးမာရေးအနေဖြင့် Google ၏ကြံ့ခိုင်သို့မဟုတ် Google Fit မှ Samsung ရဲ့ကနျြးမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်၌ဤကျန်းမာရေး data တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်နည်းပညာပိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
Sync ကိုဦးတည်ချက် Fitbit
Fitbit ဒေတာ (အိပ်ပျော်ခြင်း, လှုပ်ရှားမှု, ခြေလှမ်းများနှင့်အလေးချိန်) ကို Samsung ကနျြးမာရေးင့်က်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း Fitbit မှ Samsung ရဲ့ကနျြးမာရေးဒေတာ (အိပ်ပျော်ခြင်း, လှုပ်ရှားမှုနှင့်အလေးချိန်) တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ Google ကကြံ့ခိုင် Fitbit data တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်, သို့မဟုတ် Fitbit မှ Google Fit မှဒေတာများတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်လက်ရှိတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Fitbit ကနေ Google ကြံ့ခိုင်မှုမှရန်ထပ်တူပြုခြင်းအနာဂတျတှငျထညျ့သှငျးပါလိမ့်မည်။
ဝင်ရိုးစွန်းဒေတာ (လှုပ်ရှားမှု, ခြေလှမ်းများနှင့်အလေးချိန်) ကို Samsung ကနျြးမာရေးင့်က်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Google ကကြံ့ခိုင်အရောင်အသွေးစုံ data တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်လက်ရှိတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Sync ကိုဦးတည်ချက် Garmin
Garmin ဒေတာ (လှုပ်ရှားမှု, နှလုံးခုန်နှုန်း, အိပ်စက်ခြင်း, ခြေလှမ်းများနှင့်အလေးချိန်) ကို Samsung ကနျြးမာရေးသို့မဟုတ် Google ကြံ့ခိုင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်။
Sync ကိုဦးတည်ချက်နှင့်အတူ (ကနျြးမာရေး Mate)
Withings ဒေတာ (လှုပ်ရှားမှု, နှလုံးခုန်နှုန်း, အိပ်စက်ခြင်း, ခြေလှမ်းများနှင့်အလေးချိန်) ကို Samsung ကနျြးမာရေးသို့မဟုတ် Google ကြံ့ခိုင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်။
Sync ကိုဦးတည်ချက် Suunto
Suunto ဒေတာ (လှုပ်ရှားမှု, နှလုံးခုန်နှုန်း, ခြေလှမ်း) ကို Samsung ကနျြးမာရေးသို့မဟုတ် Google ကြံ့ခိုင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းအချက်အလက်များကိုသာလှုပ်ရှားမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။
ယင်းချိန်ကိုက်မှုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သငျသညျကနျြးမာရေး Sync ကိုအတွက် အကူအညီ Center က menu ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုစာရင်းမလျှင်, သင်ပြုစုသူတစ်ဦးကျန်းမာရေး Sync ကိုအစီရင်ခံစာပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကနျြးမာရေး Sync ကို၏အကူအညီ Center က Menu ထဲမှာတစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်း info@appyhapps.nl အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
ကနျြးမာရေး Sync ကိုသင်၏ကျန်းမာရေး data တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမထားဘူး။ သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးကိုအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကအရေးကြီးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒသည်ကိုကြည့်ပါ။
Health Sync အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Health Sync အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Health Sync အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Health Sync အား အခ်က္ျပပါ
a3fene စတိုး97.5k
Health Sync ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Health Sync အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.7.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://appyhapps.nl/health-sync-privacy/
App Name: Health Sync
Release date: 2019-07-14 12:25:59
လက်မှတ် SHA1: 54:62:8C:EE:EF:EE:1F:9B:D9:49:FF:E1:E8:26:79:E3:01:A2:BA:02
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Hielko Ophoff
အဖွဲ့အစည်း (O): appyhapps
နယ်မြေ (L): Drachten
နိုင်ငံ (C): nl
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Friesland
Health Sync APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ